ရွေ့လျားမြန်နှုန်းနှစ်ရထားအကြားခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလောကဥရောပ44 အင်္ဂလန်ရွေ့လျားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား ၂ စီးအကြားမရပ်မနားခရီးသည်တင်
11 / 12 / 2019 44 အင်္ဂလန်, ဥရောပ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, ဗွီဒီယို
ရွေ့လျားမြန်နှုန်းနှစ်ရထားအကြားမရပ်မနားခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ရွေ့လျားနေသောရထားနှစ်ခုကြား iki Moving Platform yolcu သည်ခရီးသည်များကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခြင်းမရှိဘဲခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
စက်မှုဒီဇိုင်နာများက“ Priestmangoode .. ” ဟုခေါ်သောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများပေါ်တွင်ခရီးသည်ပို့ဆောင်သည့်နေရာများတွင်အချိန်ကိုဖယ်ရှားပေးမည့်စီမံကိန်းကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ခရီးသည်များကိုရထားတစ်ခုမှအခြားရွေ့လျားသည့်ရထားသို့ပြောင်းရွှေ့စေနိုင်သည့်“ Moving Platforms sağlayan” မှ ကျေးဇူးတင်၍ ရထားများမရပ်တန့်ဘဲဆက်သွားနိုင်ရန်သေချာစေမည်။
ဂျပန်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှု! ဧရိယာမရပ်မနားခရီးသည်တင်မီးရထား! (ဗီဒီယို)
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Project မှငါ့ကိုအသက်မွေးမှုပညာရေး Leonardo da Vinci လွှဲပြောင်း
နုကမ်းလှမ်းမှုကိုဒကတ်ကြေးမော်တာလိုင်စင်နှင့်နည်းပညာလွှဲပြောင်း၏ TCDD 1000 pair တစုံစုဆောင်းခဲ့ကြ
တင်ဒါကြေငြာချက် - ထပ်ဆင့်လွှင့်အိမ်များသို့ကွန်ကရစ် kiosk တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း။
ကတ်ကြေးမော်တာလိုင်စင်နှင့်နည်းပညာလွှဲပြောင်း၏ 1000 pair တစုံကိုနူးညံ့ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်
နုများအတွက်ကတ်ကြေးမော်တာလိုင်စင်နှင့်နည်းပညာလွှဲပြောင်း၏ 1000 pair တစုံကို re-ခွဲခြားပါလိမ့်မည်
အဆိုပါစည်ကားမိနစ် Izmit ရထားဘူတာ
Uludag မနှစ်က6ရဲ့အများဆုံးတက်ကြွရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရာသီကြုံတွေ့
တင်ဒါ၏ကြေငြာချက် - Köseköyထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ Loading - ၇ ချိုနည်းလမ်းများ lar
တင်ဒါကြေငြာချက် - Transom ၀ င်းဒိုး WC ၀ င်းဒိုး Transom ၀ င်းဒိုးသည်ကြေးဝါပြောင်းရွေ့နိုင်သောဖန်…
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးသည် YHT မတော်တဆမှု၌ရထားလမ်းခရီးသည်များအားစွပ်စွဲခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါ၊ နားမကြားပါ။ နားမကြားပါကဖတ်ရန်ကြားချက်ချို့ယွင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၁ လမရူးတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ပိုက်ဆံမရှိဟုကျိန်ဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကြွေး ၄၃၅၀ ကြွေးတင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အိမ်ငှားရှိသည်။ ကျောင်းမှာပိုက်ဆံမရှိဘူးငါကျိန်ဆိုရမယ့်သုညကတိသစ္စာကျိန်ဆိုငါအမေငါ့အမေဤသို့ပြုသည်ငါသင်အလုပ်လုပ်eskişehirလမ်း hacettepe တက္ကသိုလ် beytepe ကျောင်းဝင်းကျောင်းသားကော်ဖီဆိုင်အဝတ်လျှော်အဝတ်လျှော်သန့်ရှင်းရေးဈငါ 11 ဒီထွက်ပေါက် 4.350 ရှိသည်ဤသူ၌ငါ့န်ထမ်းများ ငါအိမ်ငှားခရှိသည်။ ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ ငါအငြိမ်းစားလစာ ၁.၆၄၀ TL ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ငှားရန်ရှိသည်။ ဤငှားရမ်းမှုမှာ ၁.၁၅၀ TL၊ ကျွန်ုပ်၌အိမ်မှုကိစ္စမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောနေသနည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အထက်တန်းကျောင်းရှိသည်ဟုသင်ဘာကြောင့်ပြောနေသနည်း။ whaatsapp 15 01.01.2006 31.03.2018 ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းရသောအခါကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ